एमालेको रोग जसपामा सर्‍यो, ओली सरकारलाई कति नाफा कति घाटा ? – हाम्रो देश
काठमाडौं । सत्ता समीकरणले राजनीतिक दलहरुबीच फाटोको अवस्था सृजना गरेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल पूूरा गरेलगत्तै सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताले संक्रमणका झाँगिन मलजल गरिरहेछ ।
ओली सरकारविरुद्ध तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूह सक्रिय रहे । गत २३ फागुनको सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतियो । यसपछि एमालेभित्र ओली र नेपाल समूहबीचको टकराव आजपर्यन्त चलिरहेको छ । जसले राज्य सञ्चालनमा अवरोध सृजना गरिरहेको छ ।
ठीक, यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) देखिन थालेको छ । ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने कि विकल्पमा जाने भन्ने दुुई धारले जसपालाई चिरा पार्ने संकेत देखिएको छ ।
जसपाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो ओली सरकारको निरन्तरताको पक्षमा छन् भने उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई ओली सरकारको विकल्पमा जानुपर्ने अडान रहँदै आएको छ । सरकारले जसपाको माग अनुसार उसका १२० नेता तथा कार्यकर्ता माथि लगाइएको सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिएको छ । योसँगै जसपामा भूइँचालो गएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपत्र शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीनसहित चार जना जसपाका नेताहरुलाई मन्त्री बनाएपछि झनै सो पार्टीभित्र रडाको मच्चिएको छ । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका तीनसहित चार नेतालाई मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्कालका लागि संकट टारेका छन् ।
तर, यसले जसपामा भने संकट बढेको छ । पोखरेल सरकारको आयू लम्ब्याएर मन्त्री बनेका चार जना आफ्नो प्रदेश सभा सदस्यबाट उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षले कारबाही गरेको छ । पार्टीको निर्णय भन्दै जसपाले उनीहरुलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न प्रदेश सभामा पत्र पठाएको थियो । सोअनुसार प्रदेशसभाले उनीहरुलाई पदमुक्त भएको घोषणा गरेको छ ।
उनीहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय पार्टीको नरहेको भन्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भने निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लुम्बिनी प्रदेशका चारजना सांसदलाई कारबाही गरेपछि अध्यक्ष ठाकुर निर्वाचन आयोग ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुलाई हटाउने अधिकार पार्टी अध्यक्ष यादवलाई नरहेको भन्दै ठाकुुरले आयोग कार्यालय पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
ओली सरकारलाई घाटा कि नाफा ?
जसपाभित्रको रडाकोले ओली सरकारको सत्ता समीकरणमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने आम चासो छ । महन्थ ठाकुुर र राजेन्द्र महतो समूहले ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने देखिन्छ भने यादव–भट्टराई पक्षधर भने ओली सरकारको विकल्पमा देखिँदै आएका छन् ।
यही बेला जसपाको कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । अर्थात यादव–भट्टराई समूह ओली सरकार हटाउने पक्षमा उभिने भएका छन् ।
जसपामा ५२ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ । जसमध्य महन्थ ठाकुर समूहमा २५ र उपेन्द्रको खेमामा २७ जना सदस्य देखिन्छन् । ठाकुर पक्षधर महिन्द्र यादव पक्ष समेत उपेन्द्रतिर लागेका छन् । यसले उपेन्द्र यादव बहुमतमा देखिएको छ ।